एउटा गाउँ, जहाँ प्रत्येक पुरुषसँग दुई-दुई श्रीमती!! « गोर्खाली खबर डटकम
एउटा गाउँ, जहाँ प्रत्येक पुरुषसँग दुई-दुई श्रीमती!!
राजस्थानको बाडमेरमा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ प्रत्येक पुरुषले दुईवटा विहे गर्नै पर्छ । यो एउटा परम्परा नै भइसकेको छ । दोस्रो विहे नगरुन्जेलसम्म छोराछोरी प्राप्त हुँदैन् ।देरासर गाउँको त्यो क्षेत्रमा लगभग ७० परिवार बसोबास गर्छन् । त्यो गाउँमा जब दोस्रो विहे गरिन्छ तबमात्र त्यहाँका पुरुषहरुले छोराछोरी पाउने गर्छन् ।
पहिलो श्रीमतीबाट छोराछोरी नभएपछि यहाँका पुरुषहरुले छोराछोरी पाउने आशामा ५० वर्षको उमेर पछि पनि विहेगर्ने गर्छन् ।दोस्रो विहेबाट अहिलेसम्म कसैको ४ अनि कसैको ५ वटासम्म पनि छोराछोरी भएका छन् ।यस्तो अच्चमको परम्परा भएको यो गाउँमा एकदुई परिवार बाहेक सबै परिवार दुईवटा विहे गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस : बिभिन्न जडिबुटी बोझो हाम्रो घर वरीपरि सारेमा सजिलै उम्रने गर्छ । धेरैको घरमा बोझो सारिएको पनि होला । औषधीय गुणले भरिपुर्ण बोझोले धेरै रोगबाट बचाउँन सहयोग गर्छ । बोझोको सेवन गर्नाले खोकी सन्चो हुन्छ । त्यस्तै बोझोको सेवनले स्मरणशक्ति पनि बढ्छ । तपाईको पेटमा केही समस्या भएमा पनि बोझोले ठिक गर्छ । यसको सेवनले पेटको ग्यास निकाल्न, दिसा खुलाउन, बान्ता गराउन धेरै नै सहयोग पुर्याउछ । यदि तपाईको घाँटी दुखेको छ भने पनि बोझा सेवन गर्नाले ठिक हुन्छ। बोझो सेवनले मानसिक तनाव कम गर्न सहयोग पुर्याउछ ।